Ingxaki eHonduras ... iyaqhubeka-i-Geofumadas
Ingxaki eHonduras ... iyaqhubeka
NgoSeptemba, 2009 Izopolitiko kunye nentando yeninzi
Abo bahambahambayo, bahlala apho bahlala khona, izikhumulo zezindiza zivaliwe, unyana wam uyavuya kuba akayi kuba novavanyo lwakhe. Ixesha lokufumana ixesha elingaphezulu kweeyure ze-24, akukho shishini, akukho msebenzi, akukho sisombululo.
Eminye iphela, nje ukuqhubekeka kwaneveli efanayo apho ukugqithisa, usuku ngalunye ludweliswa ngakumbi ... phantse iinyanga yakhe yintlanzi. Kunobungozi ukuthetha into, kuba ummelwane unokuba ngaphesheya kwaye kuya kuba nzima ukuphula ulwalamano olupheleleyo kunye nomoya onyanisekileyo. Into elula kukuba ucinge ukuba uZelaya okanye uMichelletti (omnye wabini) uyona yecala lezinto zonke; abantu bafana noko, ingqondo yethu isenza sibe lula ukwenza izinto ezinzima kwaye ingqondo iququzelele iphazili ngokugxeka umntu, iqela elincinane, umhla, ukudibanisa okanye iqela lezopolitiko.
Xa senza i-50 iminyaka yokugqibela, sonke siyazi ukuba iinguqulelo ziyimfuneko ukudala iziganeko kwaye zenze utshintsho olukhulu. Kuya kuba buhlungu ukuhamba ngeengxaki ngaphandle kokudala iingcambu kwiinguqu ezifunekayo (kuba zikhona) phambi kwetyala lezentlalo ezingenakufihlakele, amasiko atshabalala bezombusazwe abajwayele ukwenza oko bafuna, imibono eyakhayo yokwakha ukuthatha inxaxheba kunye nentlukwano phakathi kwezinto eziyinyaniso kunye noko bathengisa khona. Ukwenza utshintsho omele ubhale, cinga, uphakamise, uphupha ... ungagcini nje ulubomvu obomvu ebusweni bakho okanye iikhati elimhlophe (ngaphandle). I-contingency ingaphaya koko i-Wikipedia ikhuluma ngayo, kulula locklock, kodwa akulula kakhulu ukuyifaka kumxholo ngaphandle kwebala.
Ukuqhubeka ... Iimeko ezinokuthi zihluke kwiimeko ezinokwenzeka, ukusuka kwindawo ebonakalayo ebomini, ukuba inokwenzeka iquka iingxelo okanye iziphakamiso eziyinyaniso kunye nezinye ezingekho ubuxoki, ngelixa singenako ukusho ukuba isiphakamiso sinjalo ukuba kuyinyaniso.
Singaba sisikhokelo se-105, ngoxolo lwengqondo ukuba asilahlekanga i-kbps ye-125 kwaye sikholelwa ukuba "bona" ​​kufuneka basombulule ingxaki yabo. Kodwa nathi singabantu kwilizwe elibolekelwe, sinentsapho enyanisekileyo kunye nabahlobo bethu, abanye bephula izifuba zabo ngokuchasana, abanye bathatha i-jets yamanzi; bobabini, bayazi kakuhle uxanduva lwabo kunye nokukholelwa. Yingakho asikwazi ukuyeka ukuziva, kuba unzulu kwaye sibazalwana kwaye imeko yenze ukuba sivikele iingcamango ezivumela ukuhamba kwimizuzu emfutshane esingaziyo.
Ngokuqinisekileyo, sinethemba lokuba akusihlawuli enye iminyaka ye-12 yemfazwe yoluntu kwimida yoMlambo iAraute, ukuba asinakulahlekelwa ngamalungu entsapho kunye nokuba konke ... bastards Vu melani.
Emva koko, siya kuxabisa isikhala esiye sasizicebisa ngayo le nkathazo, kwaye ukuba kunokwenzeka ukudibanisa i-neural renants engqiqweni, ukwakha umphumo ongaguqukiyo kwiimfuno ezingenakufihlwa kwingxolo eninzi. Siya kuqonda ukuba abanye abantu baphambukela kwaye bavumela abo balinde indawo yokunikela ngomsebenzi ... kwaye ke, ndithemba ukuba ndizonwabela i-barbecue kunye nommelwane wam kwakhona ngoLwesihlanu ebusuku.
Lobu bomi, ngokungaqhelekanga njengomhlathi wokugqibela, okwenene njengowokuqala kwaye unomdla njengoko nje ndacinezela inkqubela "yokushicilela" ... nje imizuzu ye-4 ngaphambi kokuphuma kwamandla.
Post edlulileyo«Edlulileyo I-Digital Digital Library
Post Next I-GIS ephathekayo, yonke into esuka kwi-USBOkulandelayo "
I-6 Izimpendulo "Iingxaki eHonduras ... iyaqhubeka"
Eyona nto ndicinga ukuba i-micheletti iyinkunkuma kwaye amandla awahambelani, akunakulungelekanga ukuba angamvumeli umongameli osemthethweni waseHonduras ukuba agqibe ixesha lakhe, ungalindi ukuba uqaphele ukuba uyabaphazamisa abantu ababaxhasa UManuel Zelaya kwaye wenza kube nzima ukulungisa.
Ngoku ukuba imeko eHonduras iyanda ngakumbi, ndivakalelwa kukuba andinakuyeka ukuvakalisa uluvo lwam malunga nalezi ziganeko ezibi kakhulu.
1) Ukuqala: Ukususa umongameli wegodanse karhulumente kwiipajama zakhe kwaye amthabathe nge-helicopter ukuya eCosta Rica (ukuba ndikhumbula ngokuchanekileyo), kwimbono yam, i-coup de state apha naseChochinchina. Ukuba ukuba kwakulungile okanye kakubi, ndiyishiye eceleni, kungekhona kuba andinayo imbono malunga nayo; kodwa kungekhona ukuhambisa amanzi amaninzi olwandle olungenalutho olusijikelezayo.
I-2) Imeko yenziwe: Kukho amacandelo amabini ekuxabaneni kunye neengxabano zabo ngokugqithiseleyo ziye zaba yimfazwe yombutho; Ixesha elibi lelokuba lizisa ntoni nalo: ukufa nokubhujiswa.
3) Yintoni enokwenzeka: Zimbini izinto ezothusayo: Okokuqala iMicheleti ibiza iBrazil kwaye isoyikisa ukungena kwi-ofisi yakhe, isazi ukuba le meko ifana nokuhlasela kunye / okanye ukubhengezwa "kwemfazwe." Okwesibini, kukuba ngoku uMel aziwa ngokuba ngu "Mel" Zelaya ubize abalandeli bakhe "ngokokukhubekisa okokugqibela" ngokungenantlonelo nangokwazi ukuba ukuphalazwa kwegazi kuya kuba kukhulu ngakumbi.
Othandekayo G!, Okuthiwa "zi-bastards" nazo zonke iipropathi aziyi kuvuma, kuba nje iklasi yezopolitiko iyasilela UKUZIVA. Banokwenza ngakumbi amabhongo abo kunye nezinto abanomdla kuzo. Kwaye jonga ukuba ukungalingani, indlala, ukungahoyi zikhona. Kodwa abo baphakamisa ukhuselo lokungalingani kwaye benza ukuxhatshazwa kwazo zonke iintlobo. Kanye njengabo bakholelwa ukuba bangamaDemokhrasi bazinikezela ngokupheleleyo kwaye bakwazise ukuba luhlobo luni lwe "Illuminatis" ekuxelela into ekufuneka uyenzile.
Kwaye ngokubhekisele ebantwaneni ... ndiyakholelwa kwaye ndiya kuhlala ndikholelwa ukuba ngokuchaza ukubaluleka kwemilinganiselo yokuziphatha, ukunyaniseka kunye nale nto siyitshoyo apha ekuhlonipheni, umhlaba usenokuba nethuba lokuba yiyo yonke into abantu abalungileyo abaza kuhlala bephupha ngayo .
Okokugqibela, ndikushiya ngeendinyana zikaLeon Gieco ovuya kakhulu ecula uMercedes Sosa "omnyama":
Ndiyabuza kuThixo kuphela
inokuba imfazwe ingabi namdla kum,
Liyi-monster enkulu kunye neentonga
bonke abahlwempuzekileyo babantu.
ebantwini abathatha inxaxheba kwimiboniso eHonduras ethwala abantwana kwaye ethwele abantwana okanye abantu abadala abangakwaziyo ukubaleka apho, bazokwenza into abafuna into eyenzekileyo ukuze kuthi xa bephelelwa ngabantwana beze kumandla Kwakhona, isigebenga esaphula umgaqo-siseko wezopolitiko waseHonduras, xa uZelaya wayengoyena mntu wokuqala wayefanele ukuba ahlonele oko kulindelwe kolunye ulwaphulo-mthetho. kodwa njengokuba okhohlakeleyo exhasa ukonakala kwaye oku kuxhaswe ngu-fidel chavez insulsa kunye nenye inkampani evela emazantsi.
nincoma uhulumeni waseHonduran wabantu baseSalvador
ukuxhathisa nokulwa nelizwe lendemokhrasi kunye nelilo lombuso onjenge-fidel chavez kunye ne-compañia.
Ndijoyine into ethethwa nguGerardo, ukuba abantwana "abazifundi" iindlela zokusombulula ukungaboni ngasonye ... kwaye nokuba njengokuba usitsho abo banganikeli okanye abangahambisiyo kude, ukuba uluntu ngokwalo lunokuthatha isigqibo, ukuba inguqu idaliwe ngoku ukuba kukho indawo ekunyanzelekileyo ukuba wena kunye noluntu olujikeleze kuyo uqhubeke ngokuhambisa, usebenza, usabelana nommelwane, usapho kunye nabo bonke abo bafunda kuwe ...
Izibingelelo zase-Iberia ...
UJuan Manuel Escuredo uthi:
Hi G!, Nqwenela wena kunye neyakho ininzi inhlanhla kwaye yonke into iphela ngokukhawuleza kwaye kakuhle kuwo wonke umntu.
Emuva ... Ndivakalisa okufanayo ngethuba lokugqibela, ndiyathemba ukuba abantwana abayikubona okanye beva ubudlova ukuze bangacingi ukuba yindlela yokwenza utshintsho, ukulungisa okuthile, njengabantu abadala ngokucinga ukucinga.